Nagarik News - किन डराउनु हिटलरको किताबसँग ?
किन डराउनु हिटलरको किताबसँग ?
18 Jan 2016 | 13:42pm
बदनामीको दाग लागेको एडोल्फ हिटलरको किताब 'मेन कम्फ'ले नयाँ जीवन पाउनै लागेको छ । ७० वर्षसम्म यसको प्रतिलिपि अधिकार जर्मनीको बाभेरिया राज्यसँग सुरक्षित थियो, जुन डिसेम्बर ३१ को मध्यरातबाट समाप्त हुँदै छ । त्यसपछि जुनसुकै प्रकाशकले यहुदीविरोधी र नश्लीय चेतका यी नाजी नेताको किताब प्रकाशन गर्न पाउनेछन्।
'मेन कम्फ' पुनःप्रकाशन हुने भएपछि उत्पन्न त्रास बुझ्न कठिन छैन । खासगरी जर्मनीमा यस्तो डर उत्पन्न भएको छ, जहाँ लेखकको मृत्युपछि यो किताबमाथि अनवरत प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको छ । तर, यो किताबको पुनःप्रकाशन हुँदै छ । यसरी प्रकाशन हुने किताबमा प्रशस्त टीका–टिप्पणी राखिएका हुनेछन् ।
यहुदी नरसंहार मच्चाउने मुलुक जर्मनीमा 'मेन कम्फ' पुनः 'बेस्ट सेलर' बन्ला भन्ने चिन्ता कतिपयलाई छ । यदि यस्तो भयो भने हिटलरले मरणोपरान्त सांकेतिक विजय हासिल गर्ने भय उनीहरूलाई छ । युरोपमा यहुदीविरोधी भावना, नश्लवाद र विदेशीको अन्धविरोध जागिरहेको बेला 'मेन कम्फ'को पुनःप्रकाशनले त्यस क्षेत्रमा जातीय तथा धार्मिक विद्वेष निम्त्याउन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ । जर्मनीसँगै युरोपभरि दक्षिणपन्थी बाहुबली समूह तथा दलको उदय भइरहेकाले यस्तो चिन्ता आधारहीन पनि छैन ।
तर 'मेन कम्फ' र अझ भन्नुपर्दा हिटलरका भाषणको इतिहास केलाउने हो भने हिटलरको भाषणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उनको विचारलाई रोक्ने कार्यबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध भेटिँदैन । सुरुका दिनमा हिटलरको भाषणमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि जर्मनीमा नाजी पार्टीको उदय भएरै छोडेको थियो । त्यस्तै, अहिले उनको भाषण र किताब जताततै उपलब्ध भए पनि उनको विचार संसारभरि आलोच्य छ ।
हिटलरका शब्दले यसरी सार्वजनिक चिन्ता उब्जाएको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् १९२४ मा उनलाई जर्मनीमा राज्यद्रोही किटान गरिएको थियो । राज्यद्रोही प्रमाणित भएपछि जर्मनीका विभिन्न राज्यले उनलाई वर्षौंसम्म सार्वजनिक स्थानमा भाषण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा निम्न कोटीको समय बिताइरहेका हिटलरले त्यतिबेला 'मेन कम्फ' लेखेका थिए ।
त्यतिबेला 'मेन कम्फ'को मूल्य बढी तोकिएको थियो । प्रकाशित भएपछि यो तत्कालै 'बेस्ट सेलर' भएन । सन् १९३० पछि जब नाजी पार्टी कमजोर राजनीतिक शक्तिबाट मूलधारको प्रभावकारी राजनीतिक शक्तिमा दरिन थाल्यो, त्यसपछि 'मेन कम्फ'को बिक्री नाटकीय रूपमा बढ्न पुग्यो । सन् १९३२ को अन्त्यतिर आइपुग्दा यसका २ लाख ३० हजार प्रति बिक्री भइसकेका थिए ।
चरम आर्थिक मन्दीका कारण युरोपमा छाएको गहिरो निराशाले जर्मनीमा नाजी सिद्धान्त फैलिने मलिलो माहौल दिलाइदियो । नाजीहरूको चरमपन्थी अभियानलाई दशौँ लाख जर्मनले मतदान गरे । तर, यसरी भोट हाल्नेमध्ये अधिकांशले न 'मेन कम्फ' पढेका थिए, न त उनीहरू नाजी पार्टीले प्रकाशन गर्ने पत्रिकाको ग्राहक नै बनेका थिए ।
अपार जनसमुदायसमक्ष पुग्न नाजीहरूको प्रोपगान्डाका आकर्षक माध्यम अरू नै थियो । लेखकका रूपमा भन्दा वक्ताका रूपमा हिटलरले कैयौँ गुणा बढी मानिसलाई प्रभावित गरे ।
सन् १९३३ मा हिटलर सत्तामा पुगेछि मात्रै जर्मनीका किताबका हरेक ¥याकमा कसै गरे पनि नछुट्ने किताब बन्न पुग्यो, 'मेन कम्फ' । नाजीवादको पतनपछि जर्मनी हिटलरका विचारका लागि वर्जित भूमि बन्न पुग्यो । उनका विचारमाथि सेन्सरसिप लगाइयो । 'मेन कम्फ'माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । र, यहुदीविरोध तथा नश्लवादलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने जगमा जर्मनीको नयाँ सत्ता निर्मित भयो ।
नाजीवादको जगजगी रहेको बेलाभन्दा आज 'मेन कम्फ' बढी भाषा र बढी राष्ट्रमा उपलब्ध छ । कम्प्युटरको किबोर्डमा केही बेर औँला चलाएकै भरमा हामी विभिन्न भाषामा 'मेन कम्फ' निःशुल्क डाउनलोड गरी पढ्न सक्छौँ । आईएसआईएसका धर्मान्ध अथवा अन्य खाले अतिवादीहरूले 'मेन कम्फ' हात पार्न सन् २०१६ सम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन । 'मेन कम्फ'का विचारमाथि कानुनी बन्देज लगाइएको भए पनि यो किताब हासिल गर्ने र यसलाई फैलाउने कार्यमाथि अहिले पनि रोक लागेको छैन । ज–जसले 'मेन कम्फ' पढ्न चाहेका छन्, पाएकै छन् ।
किताबमाथिको प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन गराउने बाभेरियन सरकारको कदम पनि प्रभावकारी छैन । बाभेरियन सरकार हात बाँधेर बसेकाले यस्तो अवस्था आएको भने होइन । कानुनी व्यवस्था बलियो भएका र कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने देशमा 'मेन कम्फ'को पुनःप्रकाशनमाथि रोक लगाइएको छ । तर, मध्यपूर्व र केही युरोपेली राष्ट्रमा जर्मनीको प्रतिलिपि अधिकारको खिल्ली उडाउँदै किताबको पुनःप्रकाशन गर्ने क्रम जारी रहँदै आएको छ ।
सन् १९३३ तिर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न नाजीहरूले यहुदी जातिको चर्को विरोध गर्ने क्रमलाई उत्कर्षमा पु¥याउँदा केही यहुदी संघसंस्थाले अमेरिकासँग 'मेन कम्फ'को बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने माग गरेका थिए । तर, अमेरिकाले किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाएन । नाजी जर्मनीविरुद्ध अमेरिकाले युद्ध घोषणा गरेपछि पनि 'मेन कम्फ'माथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएन । बरु युद्धकै क्रममा अमेरिकी पत्रपत्रिकामा 'मेन कम्फ'का विज्ञापन प्रकाशित भए । 'मेन कम्फ'को अमेरिकी संस्करण प्रकाशन गर्ने संस्था 'हटन मिफ्लिन' ले देशभक्त भएका नाताले अमेरिकी जनताले 'मेन कम्फ' पढ्नुपर्छ भन्दै यसका निम्ति आह्वान गरेको थियो । उसले सन् १९४४ मा 'द न्युयोर्क टाइम्स बुक रिभ्यू'मा 'मेन कम्फ'को विज्ञापनसमेत प्रकाशित गराएको थियो ।
हिटलरको नाडी छाम्न र उनको योजना थाहा पाउन युद्धताका अमेरिकी एजेन्सीहरूले 'मेन कम्फ'को विशद विश्लेषण गरे । युद्धपछि जर्मन समाजलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने निचोड निकाल्न पनि उनीहरूले 'मेन कम्फ'को अध्ययन र व्याख्या गरे । त्यस्तै, अमेरिकी जनताले पनि शत्रुपक्ष कस्तो प्रकृतिको रहेछ भन्ने बुझ्न हिटलरलाई पढे ।
सन् १९३९ मा युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध आरम्भ भएपछि अमेरिकामा 'मेन कम्फ'को पूर्णपाठ प्रकाशन गरियो । तर, किताबको आलोचना र व्याख्या पनि मूलपाठसँगै राखिएको थियो । हिटलरको किताब प्रकाशित भएपछि पाठकहरूको माग धान्न अमेरिकी लाइब्रेरीहरूले 'मेन कम्फ'का ठेली मगाउन थाले । 'मेन कम्फ'को त्यस्तो सहज उपलब्धताले पनि नाजी जर्मनीको पक्षमा अमेरिकी जनमत निर्माण गर्न सकेन । कुनै प्रतिबन्धले भन्दा पनि नाजी सत्ताका कारण निम्तिएको मृत्यु र विनाशले 'मेन कम्फ'लाई कलंकित बनाउने काम ग¥यो ।
युद्धपछि जर्मनी र अमेरिकासहित मित्रराष्ट्र (युद्धमा जर्मनविरोधी गठबन्धनमा आबद्ध देश)ले 'मेन कम्फ'माथि कडाइ गरे । उनीहरूले 'मेन कम्फ'माथि प्रतिबन्ध लगाउँदै यसको प्रचारप्रसारलाई आपराधिक गतिविधिको संज्ञा दिए । सन् १९४५ को फेब्रुअरीमा याल्टा सम्मेलनका क्रममा सोभियत संघ, ब्रिटेन र अमेरिकाका नेताले 'जर्मन सैन्य उन्माद र नाजीवादको समूल अन्त्य गर्ने र विश्वशान्ति खलबल्याउने गरी जर्मनीलाई कहिल्यै योग्य हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने' संकल्प गरे । सोही वर्षको अन्त्यतिर मित्रराष्ट्रले जर्मनीमाथि नियन्त्रण ग¥यो । नाजी पार्टी विघटन गरियो । नाजी पार्टी र यसमा आबद्ध संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । नाजी कानुन उल्ट्याउने काम भयो । जर्मनहरूको सार्वजनिक जीवनलाई असर गर्ने नाजी र सैन्यवादी प्रोपगान्डाका सबै साधनको उन्मुलन गर्ने निर्देशनसमेत मित्रराष्ट्रले दिए ।
यही निर्देशनबमोजिम जर्मनीमा रहेका अमेरिकी अधिकारीहरूले 'मेन कम्फ'सहित नाजी साहित्यलाई नष्ट गरेर यसलाई कागजमा परिवर्तन गरे । यसरी बनाइएका कागजलाई पाठ्यपुस्तक, पत्रपत्रिका लगायतमा प्रकाशन गर्न प्रयोग गरियो । सन् १९४५ को अक्टोबरमा अमेरिकी सैन्यअधिकारीहरूले एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरे, जहाँ 'मेन कम्फ' प्रकाशन गर्न प्रयोग गरिएको मिसिनलाई (लिड टाइप) लाई सञ्चारकर्मीका अगाडि पगालियो । र, यसरी पगालिएको फलामबाट नयाँ खाले मेसिन (पेज प्लेट) बनाइयो । यही मेसिनबाट अमेरिकानियन्त्रित जर्मनीमा पहिलोपटक युद्धोत्तर पत्रिका छाप्न थालियो ।
सन् १९४७ को मार्चतिर अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसका कर्मचारीले अमेरिकी विश्वविद्यालयका लाइब्रेरीमा राख्न भनेर जर्मनीबाट 'मेन कम्फ'का डेढ सय प्रति मगाएका थिए । तर, त्यतिञ्जेलमा जर्मनीको सार्वजनिक जीवनबाट नाजी साहित्यलाई कतिसम्म सोत्तर पारिएको रहेछ भने जर्मनीभरि खोज्दा पनि लाइब्रेरीका कर्मचारीले डेढ सय प्रति 'मेन कम्फ' जुटाउन सकेनन् । जब कि नाजीवाद अस्तित्वमा रहेका बेला जर्मनीमा दशौँ लाख प्रति 'मेन कम्फ' प्रकाशित भएको थियो ।
हिटलरका शब्द युद्धोत्तर जर्मनीका निम्ति पनि अत्यन्तै घातक हुनसक्छ भन्ने आकलन मित्रराष्ट्रका अधिकारीहरूले गरेका थिए भन्ने कुरा हिटलरका शब्दप्रति मित्रराष्ट्रले युद्धपछिका दिनमा अपनाएको कडा रवैयाले प्रस्ट पार्छ । 'न्युरेम्बर्ग ट्रायल'मा वादी पक्षका अधिवक्ताहरूले जर्मनीका नेताले मानवताविरोधी अपराध गर्ने षडयन्त्र रचेको आरोप लगाएका थिए । र, यसको प्रमाणस्वरूप उनीहरूले 'मेन कम्फ' पेश गरेका थिए । बेलायतका कानुनकर्मी मेजर एफ एलवाइन जोन्सले नाजी जर्मनीले रच्न खोजेको नरसंहारबारे बुझ्न हिटलरको किताब उपयोगी हुने त्यतिखेर बताएका थिए । ''मेन कम्फ'ले सीधै अस्विचको मान्छे पोल्ने भट्टी र मेदानेकको ग्यास च्याम्बरतिर डोहो¥याउँछ,' उनले भनेका थिए ।
तर, आज जर्मनी बिलकुल भिन्न छ । बाँकी संसार पनि जर्मनीजस्तै बेग्लै भइसकेको छ । नाजी जर्मनीले निम्त्याएको संहार र मृत्युले 'मेन कम्फ'लाई कलंकित बनाएको छ । युद्धपछिको प्रजातन्त्रका सात दशकमा जर्मनहरूले फिल्म, पत्रपत्रिका, किताब र विद्यालयमार्फत हिटलरको बोली र उसले गरेका अपराधबारे बुझेका छन् । यसबीचमा सन् १९६१ मा हिटलरको त्यतिबेलासम्म अप्रकाशित दोस्रो किताबको प्रकाशन भयो । त्यस्तै सन् १९९० मा हिटलरका भाषणहरूको भीमकाय संग्रह प्रकाशन गरियो । यी दुवै किताबले जर्मनी अथवा अन्यत्र कतै पनि नाजीवादको पुनरोदयलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनन् ।
जर्मनीको विगतलाई हेर्दा र युरोपमा यहुदीहरूको संहारका लागि 'मेन कम्फ'ले खेलेको महŒवपूर्ण भूमिकालाई ध्यानमा राख्दा यस किताबको प्रतिलिपि अधिकार समाप्त भएको अवस्थातर्फ सचेत हुनु सर्वथा उपयुक्त देखिन्छ । नाजीवादले रचेको यहुदी नरसंहारबाट बचेका यहुदी र वल्र्ड ज्विइस कंग्रेसलगायत संघसंस्थाले 'मेन कम्फ'को पुनःप्रकाशनमाथि अनवरत प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका छन् । जर्मनीको 'सेन्ट्रल काउन्सिल अफ जिउ'ले चाहिँ यसबारे अलिक भिन्न धारणा राख्ने गरेको छ । 'मेन कम्फ'को प्रतिलिपि अधिकारमा केही त्रुटि भए पनि र यसबाट जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना रहे पनि यहुदी नरसंहार र नाजीवादबारे बुझ्न यो किताबको पाठ आवश्यक रहेको उसले बताउने गरेको छ । साथै, उसले 'मेन कम्फ'को नयाँ, आलोचना, टीका–टिप्पणीयुक्त संस्करणको प्रकाशनलाई अवरोध नगर्ने जनाएको छ । 'मेन कम्फ'को यस्तै खाले संस्करण जर्मनीको म्युनिक शहरमा रहेको प्रतिष्ठित 'इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी हिस्ट्री'ले प्रकाशन गर्दै छ ।